Inkcazo yoyilo-Shenzhen HONGSBELT
Uyilo lwenkqubo yokuhambisa luhlulwe lube ngamacandelo ama-4 amakhulu ayibhanti, i-drive / i-Idle inxalenye, isakhiwo esixhasayo kunye nendlela yokuqhuba. Isakhiwo sebhanti sichazwe kwicandelo langaphambili. Ezinye iindawo ezi-3 ziya kuchaza ngezantsi ngeenkcukacha:
Umlinganiselo webhanti uya kuba nokuhluka ngenxa yokutshintsha kweqondo lokushisa. Nceda ujonge kwisahluko soBalo loLwandiso lweThermal ukuqinisekisa ubungakanani boyilo.
Ukubalwa kobubanzi bebhanti lokuhambisa kwelona qondo lobushushu liphezulu, nceda ubhekisele kulwandiso lwe-thermal / ukubala ukuncipha kwefomula. Ukuxhasa indlela yecandelo lokuqhuba, nceda ubhekisele kwinkcazo yendlela yenkxaso yebhanti ngokuhambelana noyilo lokuhambisa.
Ukuhlawulela ukwenza imilinganiselo ethile yeStainless Steel Sprocket Bore yamkelekile.
I-S-HW yi-hub dimension ye-Stainless Steel Drive Sprocket.
Ukuthintela ukwamkela iibheringi ezincedisayo kwiindawo ezingasebenziyo kumacala omabini.
Ubuncinci beDayamitha ye-Idler Roller-D (iNdlela yokuBuyisa)
Uthotho 100 200 300 400 500
íD (imiz.) 180 150 180 60 150
Umlinganiselo webhanti uya kuba nokuhluka ngenxa yokutshintsha kweqondo lokushisa. Nceda ujonge Ulwandiso lokubala kwimenyu yasekhohlo ukuze uqinisekise idimension yoyilo.
I-Roller Diameter ( min.) A (imiz.) B (imiz.) C (ubuninzi) D (umz.) E (ubuninzi)
Uthotho lwe-100 104 76 [1 38 [2 57 3 114
Uthotho 200 54 40 [1 I-18 [2 27 3 59
Uthotho 300 102 69 [1 34 [2 51 3 117
Uthotho 400 20 19 [1 7 [2 10 2 27
Uthotho 500 82 56 [1 27 [2 41 3 95
Ubungakanani boMhambisi ( Ububanzi ) Ubude
≥ 5M ≥ 10M ≥ 15M ≥ 20M ≥ 25M ≥ 30M
≥ 800 ± 2.5 ± 3.0 ± 3.5 ± 4.0 ± 4.5 ± 5.0
≥ 1000 ± 3.0 ± 3.5 ± 4.0 ± 4.5 ± 5.0 ± 5.5
Xa umthumeli wenzelwe ukuba amkele ibhanti lokuhambisa iplastiki ye-HONGSBELT enemodyuli yeplastiki enekhonkco zentsimbi, i-angle phakathi kwe-drive shaft kunye nesakhiwo sokuhambisa kufuneka ichaneke kwi-perpendicular, ukukhusela ukuguqulwa kweentonga zensimbi ezingenasici ezinokubangela ukuba ibhanti yonakaliswe ngenxa yoko. ayisebenzi ngaxeshanye.
Uninzi lwezinto zinento yokwandiswa kwe-thermal kunye nokuncipha. Ngoko ke, isenzeko sokwandiswa kwe-thermal kunye nokuchithwa kwezinto ezibangelwa ukuguquka kweqondo lokushisa kufuneka kuqwalaselwe ngelixa kuyilwa inkqubo yokuhambisa.
Ubushushu beRang yeZixhobo zeBhanti
Polypropylene Polyethylene INYLON Actel
Uluhlu lobushushu (°C)
-60 ~ 60
Itheyibhile engentla luluhlu oluqhelekileyo lobushushu bezinto zeplastiki zokusetyenziswa ngokubanzi. Ngomgangatho wokushisa osemgangathweni wezinto zebhanti ze-HONGSBELT, nceda ubhekisele kwiyunithi yeDatha eyiSiseko kwiSahluko seMveliso.
Ukwandiswa kunye neTheyibhile yokuNxibelelana yokuNxibelelana - e
Iyunithi : mm / M / °C
Izinto zebhanti Izinto eziphathekayo ezisetyenziselwa ukuxhasa Isinyithi
Polyproeylene Polyethylene INYLON Actel Teflon HDPE & UHMW Intsimbi yeCarbon Ingxubevange yeAluminiyam Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
0.12 0.23 0.07 0.09 0.12 0.14 0.18 0.01 0.02 0.01
Ulwandiso kunye neFomula yoBalo lokuNfinyeza
Bobabini ubude kunye nobubanzi bebhanti buya kuchaphazeleka ngokutshintsha kweqondo lokushisa, njengebhanti liya kwandiswa xa izinga lokushisa linyuka kunye nenkontileka xa izinga lokushisa liyancipha; le nxalenye kufuneka ithathelwe ingqalelo ngokubala ngabom ngelixa kuyilwa inkqubo yokuhambisa. Ifomyula yokubala ye-dimension yahluka ngolu hlobo lulandelayo.
IFOMU: TC = LI × ( Ukuya - TI )× e
Ubude emva kokutshintsha kweqondo lokushisa
Ububanzi emva kokutshintsha kweqondo lokushisa
Ubungakanani kwiqondo lokushisa lokuqala
Umzekelo 1: Ibhanti yokuhambisa kwizinto zePP ezinomlinganiselo kwi-18.3m ubude kunye ne-3.0m yobubanzi bebhanti, qalisa ukwenza iqondo lobushushu lokusebenza 21℃. Kuya kuba yintoni umphumo wobude bebhanti kunye nobubanzi kwiqondo lokushisa lokusebenza ukuya kuma-45 ° C?
TCL = 18.3 × ( 45 - 21 ) × 0.124 = 54.5 ( mm)
Ukususela kwisiphumo sokubala, siyazi ukuba ubude bebhanti buya kunyuka malunga ne-55mm kwaye ububanzi bebhanti bunokwenyuka phantse nge-9 mm phantsi koluhlu lobushushu 21 ~ 45 ° C.
Umzekelo 2: Ibhanti lokuhambisa kwizinto ze-PE ezinomlinganiselo kwi-18.3m ubude kunye ne-0.8m yobubanzi bebhanti, qalisa ukwenza iqondo lobushushu lokusebenza 10℃. Uya kuba yintoni umphumo wobude bebhanti kunye nobubanzi kwiqondo lokushisa lokusebenza ukunyuka ukuya kwi -40 ° C?
TCL = 18.3 × ( - 40 - 10 ) × 0.231 = - 211.36 ( mm)
TCW = 0.8 × ( - 40 - 10 ) × 0.231 = - 9.24 ( mm)
Ukususela kwisiphumo sokubala, siyazi ukuba ubude bebhanti buya kunciphisa malunga ne-211.36 mm kunye nobubanzi bebhanti bunokunciphisa phantse i-9.24mm, phantsi komgangatho wokushisa we-10 ~ -40 ° C.
Imeko yobushushu Izinto zebhanti
ACETAL INYLON P. E. P. P.
Iviniga isashukuma iAerated 21°C N O O
O = Kulungile, N = HAYI